Goorma ayaa la dhamaystirayaa howlaha ballaarinta ah ee Dekedda Berbera? + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Goorma ayaa la dhamaystirayaa howlaha ballaarinta ah ee Dekedda Berbera? + Sawirro
Goorma ayaa la dhamaystirayaa howlaha ballaarinta ah ee Dekedda Berbera? + Sawirro
(Berbera) 08 Juun 2020 – Shirkadda DP World ee ay leedahay Dowladda Imaaraadka ayaa soo bandhigtay muuqaalka sawirrada dhismaha ay ka waddo Dekedda Berbera.
Waxaa iminka la sheegayaa in howsha ballaarinta Dekedda Berbera lasoo abyi doono sanadka soo aaddan ee 2021, sida uu sheegay MW Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi.
Waxaa sidoo kale la furay qayb ka tirsan Jidka Berbera Corridor oo isku xiraya Somaliland iyo Itoobiya, kaasoo uu ujeedkiisu yahay inay marto badeecada ay Itoobiya kala soo degeyso Dekedda Berbera, waxaana lacagta bixinaya Imaaraadka Carabta oo laakiin doonaya inuu gacanta ku hayo Dekedda.
Previous articleDAAWO: Ivanka Trump oo JAC lagu dhejiyey! (Arrin lagu maadsanayo oo ay samaysay)
Next articleDAAWO: Dhakhtarad Muslim ah oo madoow oo si ARXAN DARRO ah ugu dhimatay gacanta Booliiska Maraykanka